Welldone Electronics Ltd. inyanzvi pcbb (rakadhindwa redunhu bhodhi) mugadziri muChina, anoshandira mainjiniya ekugadzira uye vagadziri vebvumirano. Welldone inogona kusangana neyako pcb yekugadzira zvido kubva kune imwe chete mativi kune yakaoma akawanda-akatetepa maPCB uye kubva kumumvuri kuburikidza nekugadzirwa kwakawanda. Ndicho chinangwa chedu kuWelldone Electronics kushandira vatengi vedu zvinodiwa nekupfuura zvavanotarisira muhunhu, kuendesa uye mutengo.
Zvigadzirwa zvedu zvinonyanya kushandiswa mukushandisa kwekutaurirana, zvekurapa, TV, DVD, wachi, mutambo wekunyaradza uye zvimwe zvigadzirwa zvemumba. Kambani ikozvino ine akati wandei epamberi wedunhu bhodhi yekugadzira michina, senge CNC kuchera, simbi yemhangura, mhangura, tini yakanamirwa otomatiki yekugadzira tambo, yekutsikisa muchina, zvizere otomatiki kupfura muchina switch, lead-isina HASL, Kunyudza Goridhe, otomatiki emagetsi zvinhu; HAL, L / F HAL, OSP (Entek), Kunyudza goridhe / sirivheri / tini, goridhe, munwe uye zvimwe pamusoro kurapwa maitiro.
Dongguan Welldone DL Electronics Ltd. inyanzvi MCPCB (simbi base PCB) inogadzira, inova welldone Electronics Ltd. uye inosimbisa kuitira kuwedzera kugona uye kudzora mhando iri nani yezvigadzirwa zveMCPCB. Dongguan Welldone DL Electronics Ltd.iri iri pane yefashoni guta Humen, kune inoyevedza yakanaka uye traffic iri nyore. Takashanda MPCB yemwenje ye LED nemwenje ye LED, uye isu tinogadzira mukugadzira kweAluminium base PCB, mhangura base PCB, mwenje pcb uye inoumbwa nezvinhu zvinopisa zvinopisa. Isu takasangana nechikwata icho chinopa kukudziridza mwenje COB yakavhenekerwa mwenje, yakakwira magetsi mwenje yealuminium base PCB uye mhangura base PCB. Isu tinoenderera mberi tichishandira pamwe nekusimudza kugona kuti tiwane kukosha kwezvinodiwa zvezvigadzirwa zveLED, senge mwenje mheni, kupenya, kuramba kumanikidza uye humbowo hwekupisa. Isu tine yedu patent yenyika yeakanyanya kushanda sirivheri COB base ndiro uye yakakwira thermal conductive board. Zvigadzirwa zvedu zvinonakidzwa nembiri yepamusoro mumusika.
Welldone Electronics Ltd. yakanangana nekuvandudzika kwetekinoroji yePCB kubva payakagadzwa, uye kuyedza kusimudzira tekinoroji yekambani uye yekutanga kirasi mhando, inouya nenguva, kuendesa, kuenderera kunatsiridza mumunda wePBB kugadzirwa kusangana nevatengi vanotungamira gwara uye kuwana kufambira mberi kukuru uye budiriro.
Mazuva manomwe 24 maawa aripo
Pane-nguva kuburitsa uye Kurumidza kutendeuka sevhisi
Kutaurirana kwakanaka uye sevhisi
Iyo kambani yakapfuura akateedzana setifiketi ye ISO9001, UL, IPC kusangana nezvinodiwa zvemhando yepamusoro
Mumakore gumi nemashanu apfuura, Welldone Electronics Ltd. yanga ichishanda muAEI, Foxconn, HP, Motorola nemamwe makambani epasi rese, uye ichipa yakanakisa uye yehunyanzvi sevhisi kune vatengi, uye vachirumbidzwa navo.